Bikro Jabinta — Cuadros
Dhaqaatiir ka TIRSAN cusbitaalada Suecia ayaa waxay kula taliyeen Dumar ka taaan Jeeda wadamada dhaqanka bikrada laga xushmeeyo en ay xirbad Isku mudaan si ay ninkooda ugu muujiyaan en ay bikro tahay. Arintaan ayaa dood dhalisay iyadoo dhaqaatiirta lagu dhaliilay en ay taageerayaan dhaqan Qaab daro ah.
Wadamo badan oo ka mediados ah bariga Dhexe Iyo aasiya ayaa aad Looga xushmeeyaa xuubka bikrada ee gabdhaha iyadoo raggu ay doonayaan en habeenka ugu horeeya ee galmadu dhacdo en gabadha dhiig ka yimaado, haddii Aysan taasi dhicin ayaa sharaf DHAC ku imaanayaa gabadha Iyo reerkeeda.
Sanadihii Dambe ayaa waxaa xitaa taaan baxay dhaqaatiir qaliin ku sameysa dumarka kuwaasoo u saara xuub bikro. Arinta yaab ka leh ayaa ah en trapo badan ay iska tuntaan oo iyaga Aysan CIDI ku xirin en ay bikro yihiin, Halka ay ay doonayaan en guursadaan gabdho bikro ah oo Keliya.
Hadaba sidee tahay idinla, wanaagsantahay ma ninku en uu bikro dalbado ISAGA oo aan laftiisa bikro ahayn?
← Rojo y púrpura de la boda
H2o Just Add Water Fondos →